Excel တွင် clipboard ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ။ - Microsoft Excel
အဓိက > Microsoft Excel > Excel ကို clipboard အပြည့်အဝ - ပြည့်စုံသောကိုးကား
Excel ကို clipboard အပြည့်အဝ - ပြည့်စုံသောကိုးကား
Excel တွင် clipboard ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ။
ဖဲကြိုး၏ File Tab ကိုပြပါ။
မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ Options ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။Excelပြသသည်Excelရွေးချယ်စရာများပေးတဲ့ dialog box ။
dialog box ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် General ကိုရွေးထားကြောင်းသေချာပါစေ။ (ပုံ ၁ ကိုကြည့်ပါ)
Enable Live Preview ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
မတ် ၁၇ 2018
ဒီဆောင်းပါး၏အကူအညီဖြင့်ယနေ့၊ Excel တွင် clipboard အား clipboard option ကို အသုံးပြု၍ မည်သို့ copy လုပ်၍ paste လုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်။
ငါတို့မှာဒီဒေတာရှိတယ်။ သင့်အားဆရာတစ် ဦး ဆိုပါစို့၊ သင်၌ကွဲပြားသောအဆင့်အတန်းအစား A၊ Class B နှင့် Class C. စက္ကူသုံးလွှာရှိသည်။ ယခုသင်စာရွက်တစ်ခုစီပေါ်ရှိကျောင်းသားအားလုံး၏အတန်းများကိုအနှစ်ချုပ်ရန်လိုသည်။
ဒါကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ငါတို့ data တွေကူးယူပြီး select လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ data ကိုသွားတယ်။ CTRL + C နဲ့ copy ပြီးတော့ target sheet ကိုသွားပြီး CTRL + V. နဲ့ paste လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်နောက်စာရွက်အတွက် copy လုပ်ပါ။ ထို့နောက်အကျဉ်းချုပ်စာရွက်ထဲသို့ paste လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Class C ကိုသွားပြီး၊ အကျဉ်းချုပ်စာရွက်ပေါ်မှာကူးထည့်ပြီး paste လုပ်လိုက်ပါ။ ဒီဒေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အကြိမ်ကူးယူပြီး paste လုပ်ခဲ့တာလဲ၊ ငါတို့သုံးကြိမ်ကူးယူပြီးသုံးကြိမ် paste လုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်မှာစာရွက် ၁၀၀ နဲ့အားလုံးရဲ့ရက်စွဲတွေရှိမယ်။ စာရွက်များကိုစာရွက်တစ်ခုတည်းဖြင့်အတိုချုပ်ဖော်ပြရန်လိုသည်၊ သင်အတူတူလုပ်ရန်သင်အချိန်ယူရမည်။
gwx kb နံပါတ်များ
သင်လုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုခက်ခက်ခဲခဲအလုပ်ဟုခေါ်သည်၊ သို့သော်သင်ကသာမာန်အလုပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်လိုလျှင် Excel ရှိ clipboard option ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က clipboard option ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသိပါစေ။ ပထမ ဦး စွာဤအချက်အလက်အားလုံးကိုငါပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုအခါငါငါကူးယူချင်သောစာရွက်ကိုသွားပေမယ့်သင်မစတင်မီနှင့်အချက်အလက်များကိုကူးယူ။ သင်လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခု၊ သင် home ခလုတ်ကိုသွားရပါမည်။ ထို့နောက် clipboard ဖဲကြိုးတွင်သင်ဤမြှားကို နှိပ်၍ clipboard မန်နေဂျာကိုဖွင့်ရမည်။ သင်၏ clipboard dialog box သည်ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်ကူးယူလိုသည့်အချက်အလက်များကိုကူးယူရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ကူးယူနေတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ clipboard မှာပေါ်လာတာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်လာမည့်စာရွက်ကိုသွား, ဒေတာကို select နှင့်ဒေတာကူးယူ။ ထိုအခါသင်ကူးယူနေသည့်စာရွက် ၃ ခုမှအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ဘယ်ဘက်ရှိ clipboard manager သို့ရောက်လိမ့်မည်။
ယခုငါကူးယူဒေတာအားလုံးကို paste လုပ်ချင်ရှိရာစာရွက်သွားဖို့ရှိသည်။ clipboard manager တွင် 'Paste All' option ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ရုံနှင့်ဤစာရွက်သုံးခုမှအချက်အလက်များအားလုံးကို paste လုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သုံးကြိမ်သာကူးယူပြီးတစ်ကြိမ်သာကူးယူရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသင်ဤ Excel လှည့်ကွက်ကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၊ ငါတို့၌ရှိသောဒေတာများကိုကလစ်ဘုတ်တွင်သိမ်းထားသောဒေတာများသည် Word, PowerPoint စသည့်အခြားသော MS Office ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ သင်က start tab နှင့် clipboard သို့သွားရုံဖြင့် clipboard ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ဒေတာကိုမဆို MS Word သို့မဟုတ် Outlook တွင် paste လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် clipboard လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုရယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ Like ခလုတ်ကို နှိပ်၍ လိုင်းကိုလည်းစာရင်းပေးသွင်းပါ။
စာသားrightရိယာ၏ညာဘက်ထောင့်မှ Menu ခလုတ် (စက်သုံးစက်သို့မဟုတ်မြှား) ကိုနှိပ်ပါ။
(4) ရွေးချယ်ပါဖျက်ပါအောက်ခြေရှိရရှိနိုင်သည့်အိုင်ကွန်ဖျက်ပါအရာအားလုံးကွမ်းခြံကုန်းမာတိကာ အသာပုတ်ပါဖျက်ပါအိုင်ကွန်။
(၅) Pop-up ပေါ်တွင် click လုပ်ပါဖျက်ပါရန်ရှင်းလင်းသောအားလုံးမရွေးချယ်ရကွမ်းခြံကုန်းမာတိကာ ရှေ့ဆက်ပါဖျက်ပါ။
22 ဇွန်။ 2020
မင်္ဂလာပါ၊ MacMost.com မှဂယ်ရီဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ငါ Mac Clipboard Manager အကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ MacMost ကိုသင်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုသူ ၅၀၀ ကျော်ကထောက်ပံ့သည်။ MacMost.com/patreon ကိုသွားပါ။
ထိုတွင်သင်သည် Patreon လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သီးသန့်အကြောင်းအရာနှင့်သင်တန်းအထူးလျှော့စျေးများရရှိနိုင်သည်။ ငါ့ကိုခဏကြာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကငါကမင်းရဲ့ Mac ကို extensions အမျိုးမျိုးနဲ့ helper app တွေနဲ့မရှုပ်မချသင့်ဘူး၊ ဝင်းဒိုးမန်နေဂျာတွေနဲ့အထူးပြုရှာဖွေရေးကိရိယာတွေမသုံးဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ သို့မဟုတ်အလားတူ။ MacOS တွင်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်ပြီးသင်၏ Mac ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးနှေးကွေးစေသည့် third-party apps များကိုအသုံးချမည့်အစား၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်အချိန်ယူသင့်သည်။
ဒါပေမဲ့၊ Mac မှာ install လုပ်ဖို့သင့်ကိုအကြံပေးတဲ့ third party tool ရှိတယ်။ ဒါက clipboard မန်နေဂျာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်သောအခါနောက်ဆုံးကူးယူသောပစ္စည်းကို paste လုပ်ထားသည်။ clipboard မန်နေဂျာသည်သင့်ကိုပြန်သွားခွင့်ပြုသည်၊ သင့်ကူးယူထားသည့်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်။ သင်ကူးယူလိုက်သောနောက်ဆုံးအရာမှ လွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုကိုကူးထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်သည်မည်သည့်အရေးအသားအမျိုးအစားကိုမဆိုလုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ clipboard ၏သမိုင်းကိုရယူခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကံကောင်းတာကသင်က App App ထက်စာရင် clipboard မန်နေဂျာအမြောက်အများကိုရှာစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခု install လုပ်ဖို့စွန့်စားရမှုမရှိဘူး၊ အများစုကအခမဲ့ဖြစ်တယ်။
clipboard မန်နေဂျာကိုရှာဖွေရန် Mac App Store အက်ပ်သို့ သွား၍ Clipboard Manager ကိုရှာပါ။ ထိုအခါသင်သည်ရလဒ်များကိုစာရင်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားသော clipboard မန်နေဂျာထွက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ထဲကတချို့ဟာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အချို့သည်တစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေခြင်းခံရပြီးအချို့မှာ subscription သို့မဟုတ် In-app ဝယ်ယူမှုများရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးရှိပြီးအနည်းငယ်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်လုပ်နေကြသည်။ သင်ကူးယူခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအရာများစာရင်းကိုသင်မှတ်မိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကူးယူခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအရာကိုကူးယူရုံသာမကဘဲသင်အရင်ကူးယူခဲ့သည့်အရာများကိုပြန်ကူးထည့်နိုင်သည်။
ငါဒီမှာသုံးနေတဲ့ CloudClip Manager ကနေသုံးခုကိုငါပြမယ်။ CloudClip Manager သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်စာသားများကိုကော်ပီကူးရုံသာမှတ်မိပြီး၎င်းသည်စာရင်းကို iCloud တွင်သိမ်းဆည်းသည်။
ကျွန်တော့်မှာ laptop နှစ်ခု၊ desktop နဲ့ Mac နှစ်ခုရှိလို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကော်ပီကူးနိုင်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုမှာအတူတူပင်အရာဝတ္ထုတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ငါတစ်ခုခုကူးယူသောအခါ, သူကကိုသတိရ။ ဒီတော့ဒီမှာတစ်ခုခုကူးကြရအောင်။
ငါအဲဒီမှာကိုကလစ်နှိပ်ပါတဲ့အခါမှာသင်ကငါကူးယူသောအရာကိုမှတ်မိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအကြောင်းအထူးဘာမှမရှိဘူး။ အခြားအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကော်ပီကူးသည့်အခါအကျိုးရလဒ်မှာဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်စာလုံးတစ်လုံးကိုကူးယူလိုက်ပြီ။ အခုအဲဒီကိုနှိပ်လိုက်ရင်ငါနှစ်ခုလုံးကိုမှတ်မိနေပြီဆိုတာမင်းတွေ့နိုင်တယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကူးယူထားနိုင်ပါတယ်။ ယခုငါစာရင်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီးဒါဟာအတော်လေးရှည်လျားပါလိမ့်မယ်။
များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကူးယူခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအရာကိုသာကူးယူနိုင်တယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်ဤစာရင်းမှအမှန်တကယ်ရွေးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာ menu ကိုသွား။ ငါကူးယူသောယခင် item ကို select ပြီးတော့ paste နိုင်ဘူး။
ရွေးစရာတွေအားလုံးကိုကြည့်ရအောင်။ ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမီနူးရှိတယ်ငါအရာအားလုံးသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒြပ်စင်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီကိုဖွင့်ပြီး Login မှာဖွင့်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ reboot လုပ်တိုင်း run စရာမလိုဘူး။
ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းရမည့်နံပါတ်အပေါ်ကလစ်ကန့်သတ်ချက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်ဆယ့်ငါးယောက်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ငါးဆယ်အထိတက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ Auto-add clips များကိုမဖြုတ်ပါကကျွန်ုပ်ဒီမှာစုစည်းနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုကော်ပီကူးပြီး၊ စာရင်းထဲသို့ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်သည်ကိုမြင်သောအခါဤသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရင်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အလွန်တိကျသောအရာများကိုသာထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ စကားဝှက်ကိုလျစ်လျူရှုရန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်မှအရာများကိုအခြားနေရာများတွင်ကူးထည့်ရန်ကူးယူမိပါက၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တော်တော်လုံခြုံသောအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်စာရင်းထဲတွင်မသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ၊ ရေပူသော့ရှိလိမ့်မည်။ Hot key ကဒီ menu ကိုပေါ်လာအောင်ကီးဘုတ်နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါ Control Option Command V ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် menu ကိုယူလာသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ငါမြားသော့ကိုသုံးနိုင်သည်ဆင်းသွား။ တစ်ခုခုရွေးပြီးတော့ paste လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယ Mac ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီး Apple ID အတူတူသုံးပါမယ်။
တူညီတဲ့ပစ္စည်းများအဲဒီမှာပေါ်လာသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်နည်းနည်း ပို၍ နည်းပညာပိုင်းအရအသုံးပြုသောနောက်တစ်ခုမှာ Flycut Open ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CloudClip ကဲ့သို့မီနူးတွင်ပေါ်လာပြီး၎င်းသည်အလားတူအလုပ်လုပ်သည်။ ငါအနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာတို့ကိုကူးယူပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရှုလျှင်, သင်သည်ဤဒြပ်စင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Flycut နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တစ်ခုမှာသင်ရွေးလိုက်သောအခါ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိုက်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရွေး။ မရပါ။ ဤနေရာတွင်အရာများကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းရှိသည်။
ငါဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် iCloud မှတဆင့်ချိန်ညှိချက်များနှင့်ညှပ်များကိုစည်းညှိနိုင်ပြီး HotKey ကိုထည့်သွင်းခြင်းစသည့်ကောင်းမွန်သောဆက်တင်များရှိသည်။ HotKey သည် menu မှ s Anything ကိုရွေးချယ်ခြင်းထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ဒီတော့ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုခုကိုကူးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဥပမာငါ toggle V command ကိုသုံးတယ်။ ဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့ overlay အနည်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတာသင်တွေ့နိုင်တယ်။
မတူညီသောအရာများအကြားပြောင်းလဲရန်မြှားခလုတ်များကို သုံး၍ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းရန်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ချိန်ညှိချက်များတွင်၎င်းကိုစေးကပ်စေသည့်အရာများပြုလုပ်နိုင်သည်။ toggle command V ကို run လိုက်ရုံနှင့်သင်လိုချင်သော element ကိုမရွေးမှီတိုင်အောင်ထိုတွင်ရှိနေမည်။ ငါက 'စကားဝှက်များထံမှကူးယူခြင်းမပြုပါ' 'ကိုလည်းသတ်မှတ်နှင့်ထိုအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။
ငါဒီအလွှာ၏အသွင်အပြင်ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်သင်ကဒီမှာနည်းနည်းပိုပြီးနည်းပညာပိုင်းမြင်နိုင်ပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ တတိယဥပမာကတော့ CopyClip ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တူညီသော developer မှအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ထည့်သွင်းထားသောကြော်ငြာရှိသည်။
ဒါပေမယ့်သူက menu ၏တူညီသောအမျိုးအစားနှင့်အတူပါရှိသည်။ ငါအရာအချို့ကိုကူးယူပြီးတော့ငါဒီမှာစာရင်းကြည့်ရှုပါ။ ချိန်ညှိချက်များအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Startup ကိုစပါကမည်မျှမှတ်မိသင့်သည်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ခြွင်းချက်များအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်း။ ဒါကစကားဝှက်မန်နေဂျာများကဲ့သို့သောအရာများကိုငါပယ်ဖျက်နိုင်ပုံဖြစ်ပါသည်။ သင်ဝင်ကြည့်ပြီး၎င်းကိုချက်ချင်းမထည့်ပါ။
Command V. ကို run ရန်လိုအပ်သည်။ ဤဖြတ်လမ်းများသည်သင်ရှိမီနူးကိုရွေးချယ်သောအခါအရာခပ်သိမ်းကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်သင်သည်ဤအချက်ကို ဖြတ်၍ ဤအရာကိုရွေး။ ပစ္စည်းကိုရွေးပြီးသင်ထည့်ရန်လိုသည်။
အကယ်၍ သင်ငွေပေးချင်လျှင်ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ပုံအချို့ကိုထည့်နိုင်သည့်စာသား၊ စာသား၊ Richtext နှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြား clipboard မန်နေဂျာများထဲမှစွမ်းဆောင်ချက်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အချို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြပြီးသင်အားလျင်မြန်စွာဆွဲချနိုင်သော menu ထက်သင်နှင့် clipboard တွင်ရှိသည့်အရာများကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့် Mac App Store ကိုစစ်ဆေးပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် ​​clipboard manager ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ free တွေကိုစမ်းကြည့်ပါ။ clipboard မန်နေဂျာတွေကိုချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ခင်ဗျား Mac မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ။
ကျွန်ုပ် clipboard ၏အရွယ်အစားကိုဘယ်လိုတိုးနိုင်မလဲ။
System Properties ၀ င်းဒိုးရှိ Advanced tab ကိုနှိပ်ပါ။
Performance Options ၀ င်းဒိုးရှိ Advanced tab ကိုနှိပ်ပါ။
paging ဖိုင်အလိုအလျှောက်စီမံခန့်ခွဲမှုဘေးရှိအမှတ်အသားအကွက်ကိုရှင်းလင်းပါအရွယ်အစားအားလုံး drives တွေကို option ကိုအဘို့။
>> Wade: မင်္ဂလာပါ။
အင်ဒီယားနားရှိ Easter Seals Crossroads at Indata Project နှင့် Wade Wingler ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ခေတ်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အချာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာတွင်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်နှင့်အတူ clipboard မန်နေဂျာအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောလိုသောကြောင့်။ မင်းတို့ငါတို့တွေဟာကမ္ဘာကြီးမှာမိတ္တူတွေ၊ အတိတ်တွေနဲ့အတူနေနေကြတယ်ဆိုတာသိလား။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်တာနက်ပေါ်ကအရာတွေကိုအမြဲတမ်းကူးယူပြီးကူးယူပြီးအခြားသူများကိုဝေမျှခြင်း၊ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများနှင့်အရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပါ။ နှင့်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်, ငါကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူနှင့်တူသောခံစားရတယ်သည့်အခါများနှင့်အနည်းငယ်ခက်ခဲသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်များအကြားအချိန်နှင့်အမျှနောက်ကျောနှင့်ထွက်လှန်လှောတစ်စုံတစ်ခုရရှိသောအခါ။
ဒါကြောင့် clipboard manager လို့ခေါ်တဲ့ class တစ်ခုလုံးနဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့က Mac အတွက်လုပ်တယ်။ Windows အတွက်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစီမံပေးတယ်။ ယနေ့ငါပြ ဦး မည့်အချက်မှာ clipboard manager ၏ Mac version ဖြစ်သည်။ အဲဒါငါအများကြီးသုံးတာပဲ။
၎င်းကို Copy'em Paste ဟုခေါ်သည်။ မျက်နှာပြင်တွင်သင့်အား interface ၏အမည်ကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၇ ဒေါ်လာခန့်ကုန်ကျပြီးသင် Apprywhere မှရရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအနည်းငယ်သာဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာအချို့ကိုပြသထားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကသင် clipboard မန်နေဂျာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုပြချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီ blog post မှာရွေ့လျားမှုချို့တဲ့သူတွေအတွက်ဘောပင် ၅ ခု (သို့) ဘောပင်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ငါတို့လူမှုရေးမီဒီယာအကြောင်းအရာအထူးကု Laura Medcalf ရေးတဲ့ blog post တစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ဒီဘောပင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုငါရေးပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ဆီအီးမေးလ်ပို့ချင်တယ်ဆိုပါစို့။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ mouse ကိုယူပြီးပထမတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးညာဖက် နှိပ်၍ Copy ကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကကီးဘုတ်တွင် command + C ကို run ပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် Mac ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်၎င်းအမည်ကိုကူးယူပြီးကျွန်ုပ်သွားပါလိမ့်မည်။ အီးမေးလ်ကိုလှန်လှောကြည့်လိုက်ရင်ဘောပင်တစ်ချောင်းလို့ပြောရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မသေချာဘူး၊ ဒါကိုဒီမှာကူးထည့်လိုက်မယ်။ ပြောင်း၊ ထွက်၊ ထွက်၊ ခဏခဏပြောင်းရမယ်။ clipboard မန်နေဂျာငါတ ဦး တည်းကူးယူပြီးတော့အခြားကိုရွေးချယ်နှင့်ကူးယူခြင်းနှင့်အခြားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အခြားရွေးချယ်ပါနှင့်အခြားရွေးချယ်ပါကူးယူနှင့်ဒီမှာကဒီမှာနောက်ဆုံး, ပဉ္စမကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ငါအီးမေးလ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဒီမှာငါပြန်ပြင်လိုက်မယ်။ ငါကလူတိုင်းကိုဖန်သားပြင်နှစ်ခုကြားမှာလှန်လှောကြည့်စရာမလိုဘဲအဲဒီမှာထားချင်တယ်ဆိုပါစို့။
များသောအားဖြင့်ငါတို့ထည့်လေ့ရှိတယ်၊ ငါ Mac ကိုသုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် Command + V ကိုသုံးသည်။ Copy'em Paste ကို install လုပ်ပြီးကတည်းက Command + Shift V ကို run လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ key ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော် pasted လုပ်ခဲ့တဲ့အရာ ၅ ခုထဲကစာရင်းတစ်ခုပါလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကပထမကိုနှိပ်နိုင်သည်ကချက်ချင်းဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ငါဒုတိယအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဒါပေါ်မှာ right ပေါ်မှာ paste လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ clipboard တွင်ဤလှိမ့်သောအရာများစာရင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကိုအခြား application တစ်ခုထဲသို့ paste လုပ်ချင်တယ်ဆိုလျှင်ငါဒီမှာ Textedit ကိုစတင်ပါ။ Opps Wrong Program, TextEdit နှင့်ငါဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဒီစာရင်းကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ Command key V နဲ့ဒီအရာတွေကိုငါလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ clipboard မှာရှိနေသေးတယ်၊ သူတို့ကသူတို့ကိုငါမသွားခိုင်းခင်အထိသူတို့ဆက်နေမယ်၊ ဒီစာရင်းကဆက်ပြီး၊ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်မယ်၊ ဒါကိုသင်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
သင် Copy'em Paste ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်များစွာသောထိုအရာများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Mac ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက Windows ကိုအသုံးပြုပါက clipboard မန်နေဂျာများကိုသာရှာဖွေပါ၊ သင်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်၊ အချို့မှာအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ အချို့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ဒါကြောင့်ဒီရက်သတ္တပတ်အတွက်သင့်ရဲ့နည်းပညာအစွန်အဖျားပါ။
အင်ဒီယားနားရှိ Easter Seals Crossroads ရှိ Indata Project နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Wade Wingler ဖြစ်သည်။
သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ရှင်းလင်းသောမင်းရဲ့ကွမ်းခြံကုန်းဝင်းဒိုးဆက်တင်များမှဒေတာ။ ချိန်ညှိချက်များ> စနစ်> သို့သွားပါကွမ်းခြံကုန်းနှင့်နေရာချထား 'Clipboard ရှင်းရန်ဒေတာ” အပိုင်း။ “ ကိုနှိပ်ပါ။ရှင်းလင်းသော'ခလုတ်ကိုနှင့်ကွမ်းခြံကုန်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မေလ ၁၉ ရက်၊
ဟယ်လို! ဒီဆောင်းပါးမှာသင်လိုအပ်လျှင် Windows clipboard နှင့် clipboard ၏သမိုင်းကိုရှင်းလင်းရန်သင်ပြပါလိမ့်မည်။
အပေါ်ကစာသားကိုကူးယူခြင်းဖြင့်ငါပြမယ်။ စာသားကို clipboard ၏သမိုင်း (Win + V) တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် startup တွင် clipboard နှင့် clipboard ၏သမိုင်းကိုအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းနိုင်သည်။ သင်ယခု CTRL + V ကိုနှိပ်ပါက clipboard သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ clipboard ကိုဖျက်ပစ်သောကြောင့်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ငါသည်လည်းဤ script များ VirusTotal သို့ upload တင်ပါလိမ့်မယ်ငါ UPX နှင့်အတူထုပ်ပိုး။
အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ ငါသည်လည်းအလားတူပြုသည်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အင်ဂျင်များကမှားယွင်းသောလက္ခဏာအဖြစ်တွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါတဲ့ BAT ဗားရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖိုင်နှစ်ခုလုံးသည်အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ဤတွင် script ၏ဗားရှင်း ၂ ခု (ပထမဖိုင် ၂ ခု) ဤသည် BAT ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးသည် admin အတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်လိုအပ်သောကြောင့် UAC ကိုအချက်ပြလိမ့်မည်။ exe ဖိုင် (မှားယွင်းသောအပြုအမူ) နှင့်မတူဘဲ၊ BAT ဗားရှင်းကို AV အင်ဂျင်များကအသိအမှတ်မပြုပါ။
သင်မည်သည့်လိုအပ်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယခုငါ BAT ဗားရှင်းစမ်းသပ်နေပါတယ်။ clipboard ရှင်းလင်းပြီးပါပြီ! ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအတိုင်း၊ BAT ဗားရှင်းကို VirusTotal ၏ AV အင်ဂျင်များကမရွေးပါ။ EXE ဖိုင်သည်မှားယွင်းသောအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်ဖြစ်သော VirusTotal တွင်တွေ့ရှိသော heuristic / Reputation Engines များမှသာအသုံးပြုသည်။
BAT ဗားရှင်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးသည်သန့်ရှင်းပြီးအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ ကြည့်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Excel ရှိ clipboard သို့သင်မည်သို့ရောက်နိုင်သနည်း။
ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုရန် Clipboard ဘောင်ရှိ Options ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပစ္စည်းများကိုကူးယူသောအခါ clipboard ကိုပြပါ။ သင် CTRL + C ကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်သောအခါ Clipboard ကိုပြပါ။ အရာများကို Clipboard task pane ကိုမပြဘဲ Clipboard သို့ကူးပါ။
clipboard ထဲက clip တစ်ခုကိုသင်ဘယ်လိုဖျက်မလဲ။
clipboard တစ်ခုလုံးကိုရှင်းရန် Clear All ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ တစ် ဦး ချင်းစီကလစ်တစ်ခုကိုဖျက်ရန်ကလစ်ဘေးတွင်မောက်စ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ကလစ်၏ညာဘက်ရှိမြှားကို နှိပ်၍ ဖျက်ပါကိုနှိပ်ပါ။
Mac ပေါ်မှာ clipboard ကိုဘယ်လိုဖွင့်သလဲ။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်ရန်၊ သက်ဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှေ့သို့ရွေ့လျားမှုကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားရန်ပြသမည့် Clipboard ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုရန် Clipboard ဘောင်ရှိ Options ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပစ္စည်းများကိုကူးယူသောအခါ clipboard ကိုပြပါ။ သင် CTRL + C ကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်သောအခါ Clipboard ကိုပြပါ။
ဘာကြောင့်ငါ့ clipboard ကပြည့်နေတာလဲ။
သင်သည်သင်၏ clipboard တွင်ပစ္စည်းများစွာကိုစုဆောင်းသောအခါသင်၏ clipboard ပြည့်နေပြီဟုသင်အမှားတစ်ခုရလိမ့်မည်။ ဤတွင် clipboard ရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။ ကလစ်အားလုံးသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုဖျက်ရန်၊ ပထမ ဦး ဆုံး Clipboard task pane ကိုဖွင့်ပါ။ Home tab တွင်၊ Clipboard အုပ်စုတွင်၊ Clipboard dialog box launcher ကိုနှိပ်ပါ။